एजेन्सी। संयुक्त राष्ट्रसंघको गाडीभित्र ‘सेक्स स्क्याण्डल’मा संलग्न दुई कर्मचारीलाई राष्ट्रसंघले निलम्बन गरेको छ। इजरायलको अभिभस्थित यूएनको गाडीभित्रै कर्मचारीले यौन सम्पर्क गरिरहेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि यूएनले यस्तो निर्णय गरेको हो। उनीहरुलाई..
काठमाडौं। विवाहलाई हेर्ने हाम्रा अनेक दृष्टिकोणहरू छन्। विवाह एउटा असल जीवनसाथी खोज्ने र व्यावहारिक जीवनतिर प्रवेश गर्ने बाटो पनि हो। तर, योसँगै विवाहले मानिसको यौन जीवन व्यवस्थापनको कामसमेत गर्छ। यद्यपि विवाहित..
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको कहरले मानिसको जीवनका हरेक पाटामा असर पारिरहेको छ। नेपालमा सामान्य अवस्थामा भन्दा करिब २ सय प्रतिशत मातृ मृत्युदर बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ। पछिल्ला केही वर्ष..
काठमाडौं। अचानक कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध बन्नुलाई क्याजुअल सेक्स भनिन्छ। यो यौन सम्बन्धमा सहमति र इच्छा पनि हुन्छ। तर क्याजुअल सेक्सपछि अक्सर महिलाहरुमा पश्चाताप र गल्तीको महसुस हुन्छ। एक अध्ययनअनुसार यति सेक्सको..
काठमाडाैं, ८ असार । भित्र कुकर पाल्नका लागि अब अनुमति लिनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने तयारी भइरहेको काठमाडाैं महानगरपालिकाले जनाएको छ। रहरका लागि कुकुर पाल्ने तर जनावर बिरामी भएपछि..
काठमाडौं। विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतको गुजरात राज्यमा मात्रै कम्तीमा तीस हजार बिवाह स्थगित गरिएका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन लागेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेकाले उनीहरुको बिवाह..
बेङ्लोर। बेङ्लोरमा आइतबार एक जोडी बैबाहिक जीवनमा बाँधिदै थिए। जबकी त्यतिबेला बेङ्लोरमा कर्नाटक सरकारले लकडाउन लागु गरेको थियो। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्दै आइरहेको छ। भारतमा अहिले..
काठमाडौं। यौन जीवन कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इमोसनका साथै जोडीबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्छ। तर, यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यौन सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरीरमा केही..
काठमाडाैं, २९ चैत। चितवनमा एम्बुलेन्स प्रयोग गरी लागुऔषध ओसारपसार गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–२ जुनहल नजिकै एम्बुलेन्स जाँच गर्ने क्रममा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका तीन जनालाई सार्वजनिक गरिएको हो..
न्युयाेर्क, ४ चैत । अमेरिकामा बाघमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएको छ । बीबीसीले उल्लेख गरेअनुसार अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ब्रोन्क्स चिडियाघरमा चार वर्षको बघिनीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो..
काठमाडाैं, १९ चैत । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण आधाभन्दा बढी जनसंख्या क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य छ । त्यसैकारण धेरै मानिसले घर परिवारलाई समय दिइरहेका छन् । आजको कामकाजी युगमा..
छत्तिसगढ, १३ चैत । कोरोना भाइरसबाट बच्‍न केहीले तीन पत्र भएको मास्क लगाउन सुझाएका छन् भने चिकित्सकहरुले एन९९५ मास्क लगाउन सुझाव दिएका छन् । तर, कोरोना भाइरसको जोखिमबारे कसैले सुनाएपछि..
काठमाडाैं,१५ फागुन। राजधानीमा आयोजित एउटा विवाहमा दुलाहा नआएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित उक्त विवाह समारोहमा १२ बजे आउने भनिएको जन्ती नै नआएपछि केटी पक्षले प्रहरीलाई उजुरी गरेको..
एजेन्सी, २३ माघ । पाइलटबिनाको विमान चल्न सक्ने कुरा समय अगाडिदेखि चल्दै आएको छ । पाइलटबिनाको व्यावसायिक बिमान सम्बन्धी योजना बनाइए पनि थुप्रै विमानहरुले यो सफलता हासिल गरिसकेपछि पनि अझै पाइलटबिनाको विमान पूर्ण रुपमा..
काठमाडाैं २१ माघ। एजेन्सी । यसअघि चीनले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुका लागि ६ दिनमै एक हजार भन्दा बढी बिरामी अटाउन सक्ने अस्पताल निर्माण गरि विश्वलाई चकित पारेको थियो । यसैगरी देशभर फेस..
काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बिटारनगर जाने उडानमा परिचारिकाले नचिनेपछि शहर र गाउँको राजनीतिक चेतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले ट्वीटरमा विमानकी परिचारिका र गाउँकी..
काठमाडौँ, १३ माघ सबैभन्दा धेरै मिठाई खाने प्रतिस्पर्धा जित्ने चक्करमा अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डमा ६० वर्षकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । हार्वी बेस्थित बीच हाउस होटलमा ती महिलाले प्रतियोगिता जित्नका लागि एकपछि अर्को..
मुम्बई, १० माघ । बुधवार राति मुम्बईबाट हैदराबादका लागि उडेको इन्डिगो एयरलाइन्सको एक विमान इन्जिन बिग्रेपछि मुम्बई फर्केको छ । विमान ए३२० नियोको प्य्राट यान्ड ह्विट्नी इन्जिन बीचैमा बन्द भएपछि उडेको..
काठमाडौं, २६ पुस । संयुक्त अरब अमीरातमा एक व्यक्तिले आफ्नो पेटमा २ सय ९७ ग्राम हीरा बोकेर कतै गइरहेको भटिएकाे छ । गल्फ न्यूजका अनुसार फेडरल कस्टम्स अथोरिटीले दिएको जानकारी अनुसार, केही दिन..
एजेन्सी, २५ पुस । जापानका अर्बपती युसाकू मिजावा ट्वीटरमा उनलाई फलो गर्नेलाई ९० लाख डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ) रकम बाँड्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यसलाई एक सामाजिक प्रयोग..
काठमाडौँ, १५ पुस धेरैजसो मानिसले पर्सलाई आफ्नो पछाडिको खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । यदि तपाईं पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानी तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ नभए विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्छ । पर्समा..
वासिङ्टन, १४ पुस चार्ली म्याकमिलान नाम गरेका अमेरिकी शिशु ७ महिना मात्रै पुगे । अमेरिकाको गर्भपतनविरोधी अभियानसँगै उनी अचानक शासक बनेका छन् । टेक्सस समुदायमा उनलाई हालै मेयरको उपाधि दिइएको छ ।..
काठमाडौँ, १० पुस मेकअपले युवतीहरुलाई एकछिन त राम्रो देखाएपनि कालान्तरमा हानी गर्दछ । यो हामीलाई थाहा हुदाँहदै पनि गरिरहेका हुन्छौ । मेकअप र प्रेमको बीच पनि अचम्मको सम्बन्ध हुने जानकारहरु बताउछन्..
काठमाडौं, पुस ६ आज यस वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात परेको छ। आज बिहान ६ बजेर ५१ मिनेटमा उदाएको सुर्य बेलुकी ५ बजेर १४ मिनेटमा अस्ताउनेछ । पृथ्वीको उत्तरी खण्डमा..
डोटी, १ पुस । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तडमा हिमपातका कारण अवरुद्ध भएको बाटो खोल्न नेपाली सेना लागिपरेको छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज जाने बाटो हिउँले पुरिएपछि त्यहाँ तैनाथ रहेको नेपाली..
सुर्खेत, ३० मङ्सिर तिला गाउँपालिका–९ जुम्ला ढिपुगाउँका १२ जना शेरा फूलबारी पाटनबाट बेपत्ता भएका छन् । जडीबुटी सङ्कलन गर्न गएका उनीहरु चार दिनदेखि सम्पर्कमा आउन नसकेको तिला गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर..
काठमाडौं, २२ मंसिर । पौडीकी खेलाडी गौरिका सिंहले जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नयाँ कीर्तिमान राख्दै सागको एउटै संस्करणमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छिन् । यसअघि २..
काठमाडौँ, २१ मङ्सिर हाँसो–ठट्टा गर्ने मान्छे प्राय कसलाई मन पर्दैन् र, विशेष केटीहरु यस्ता केटालाई बढी मन पराउँछन्, १. ‘बोर फिल’ हुन दिँदैनन्ः रमाइलो गर्ने व्यक्तिसँग जो पनि बस्न रुचाउँछ किनभने यस्ता व्यक्ति..
भद्रपुर, २० मङ्सिर । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३ स्थित कालीझोडा र १५ नं वडाको ज्यामिरगढीका बासिन्दालाई जङ्गली हात्तीले दुःख दिन थालेको छ । अहिले हात्ती समसाँझै गाउँ पसेर घर भत्काउन, लगाएका अन्नबाली..
एजेन्सी, १९ मङ्सिर । पृथ्वी जीव बस्नप्रतिकूलबाट अनुकूलतातर्फ कहिले आयो होला ? पृथ्वीको परिवर्तन प्रक्रियाबारे पहिले सोचेभन्दा फरक र नाटकीय किसिमको रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । दुई अर्ब तीन करोड वर्षअघि..
Results 603: You are at page 1 of 21